Programmatic Advertising၊ ၎င်း၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းများနှင့် Ad Tech Leaders | Martech Zone
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အင်တာနက်မှာ ကြော်ငြာတွေ အတော်လေး ကွာဟခဲ့ပါတယ်။ ထုတ်ဝေသူများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကြော်ငြာကွက်များကို ကြော်ငြာရှင်များထံ တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို လေလံဆွဲဝယ်ယူရန် ကြော်ငြာဈေးကွက်များအတွက် အိမ်ခြံမြေကြော်ငြာထည့်သွင်းရန် အိမ်ခြံမြေကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဂရန် Martech Zoneကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြော်ငြာအိမ်ခြံမြေကို အသုံးပြုသည်... သက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာများပါသည့် ဆောင်းပါးများနှင့် စာမျက်နှာများကို ငွေရှာရန်အတွက် Google Adsense ကိုအသုံးပြု၍ တိုက်ရိုက်လင့်ခ်များထည့်သွင်းခြင်းနှင့် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများနှင့် စပွန်ဆာများဖြင့် ကြော်ငြာများပြသခြင်း။
ကြော်ငြာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ ဘတ်ဂျက်များ၊ ၎င်းတို့၏ လေလံများကို ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့် ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် ကြော်ငြာရန် သင့်လျော်သော ထုတ်ဝေသူကို သုတေသနပြုရန် အသုံးပြုပါသည်။ ထုတ်ဝေသူများသည် ၎င်းတို့ပါဝင်လိုသော စျေးကွက်များကို စမ်းသပ်စီမံရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ပရိသတ် အရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍ ၎င်းတို့သည် ၎င်းအတွက် အတည်မပြုနိုင် သို့မဟုတ် မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ သို့သော် လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း စနစ်များ တိုးတက်လာသည်။ ဘန်းဝဒ်၊ ကွန်ပြူတာစွမ်းအင်နှင့် ဒေတာစွမ်းဆောင်ရည် သိသိသာသာ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ စနစ်များသည် အလိုအလျောက် ပိုကောင်းလာခဲ့သည်။ ကြော်ငြာသူများသည် လေလံအကွာအဝေးများနှင့် ဘတ်ဂျက်များကို ထည့်သွင်းကြပြီး၊ ကြော်ငြာဖလှယ်မှုများသည် စာရင်းဇယားနှင့် အနိုင်ရသောလေလံများကို စီမံခန့်ခွဲကာ ထုတ်ဝေသူများသည် ၎င်းတို့၏ ကြော်ငြာအိမ်ခြံမြေအတွက် ကန့်သတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးကြသည်။
ဝေါဟာရ အစီအစဉ်မီဒီယာ (စအဖြစ်လူသိများ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး or အစီအစဉ်ကြော်ငြာ) သည် လူကိုအခြေခံသည့်နည်းလမ်းများကို အစားထိုးခြင်းဖြင့် မီဒီယာစာရင်းကို အလိုအလျောက်ဝယ်ယူခြင်း၊ နေရာချထားခြင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပေးသည့် နည်းပညာများစွာပါဝင်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအားပါတနာများသည် ကြော်ငြာများကို အီလက်ထရွန်နစ်ပစ်မှတ်ထားသော မီဒီယာစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရန် အလိုအလျောက်စနစ်များနှင့် လုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများကို အသုံးချသည်။ ပရိုဂရမ်မာမီမီဒီယာသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့် ကြော်ငြာလုပ်ငန်းတွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်နေသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု အကြံပြုထားသည်။
ပရိုဂရမ်မာ ကြော်ငြာများတွင် ပါဝင်သည့် ပါတီများစွာ ရှိပါသည်။
ကြော်ငြာ - ကြော်ငြာသူသည် အပြုအမူ၊ လူဦးရေစာရင်း၊ စိတ်ဝင်စားမှု သို့မဟုတ် ဒေသအပေါ်အခြေခံ၍ တိကျသောပစ်မှတ်ပရိသတ်ထံ ရောက်ရှိလိုသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူ - ထုတ်ဝေသူသည် အကြောင်းအရာကို အဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုနိုင်ပြီး ပစ်မှတ်ထားသော ကြော်ငြာများကို ဒိုင်းနမစ်ထည့်သွင်းနိုင်သည့် နေရာရှိ ကြော်ငြာအိမ်ခြံမြေ သို့မဟုတ် ဦးတည်ရာစာမျက်နှာများကို ပေးသွင်းသူဖြစ်သည်။
ထောက်ပံ့ရေး-ဘေးထွက်ပလပ်ဖောင်း - အ ssp လေလံဆွဲခြင်းအတွက် ရနိုင်သော ထုတ်ဝေသူများ၏ စာမျက်နှာများ၊ အကြောင်းအရာနှင့် ကြော်ငြာဒေသများကို အညွှန်းများပေးသည်။
ဝယ်လိုအား - ဘေးထွက်ပလက်ဖောင်း - အ DSP ကြော်ငြာရှင်များ၏ ကြော်ငြာများ၊ ပစ်မှတ်ပရိသတ်၊ လေလံနှင့် ဘတ်ဂျက်များကို အညွှန်းပေးသည်။
ကြော်ငြာလဲလှယ်ရေး - ကြော်ငြာလဲလှယ်မှုသည် ကြော်ငြာရှင်၏ ကြော်ငြာသုံးစွဲမှုအပေါ် ပြန်အမ်းငွေအများဆုံးရရှိရန် သင့်လျော်သော အိမ်ခြံမြေသို့ ကြော်ငြာများကို ညှိနှိုင်းပေးပြီး ထိမ်းမြားလက်ထပ်သည် (ROAS).
အချိန်နှင့်တပြေးညီ လေလံဆွဲခြင်း။ - RTB ကြော်ငြာစာရင်းကို ဆွဲဆောင်မှု၊ ဝယ်ယူမှု၊ ရောင်းချမှုဆိုင်ရာ နည်းလမ်းနှင့် နည်းပညာဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ ဤပလပ်ဖောင်းများကို ကြော်ငြာရှင်ကြီးများအတွက် မကြာခဏ ပေါင်းစပ်ထားပါသည်-
ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်း - ပရိုဂရမ်စနစ်ကျသော ကြော်ငြာနေရာအတွက် နောက်ထပ်အသစ်တစ်ခု ထပ်တိုးလာပါသည်။ DMPပရိသတ်များ (စာရင်းကိုင်၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၊ CRM စသည်ဖြင့်) နှင့်/သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း (အပြုအမူ၊ လူဦးရေ၊ ပထဝီဝင်) ဒေတာများကို ကြော်ငြာသူ၏ ပထမပါတီဒေတာကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သုံးစွဲသူအချက်အလက်ပလက်ဖောင်း - တစ်ဦးက CDP အခြားစနစ်များသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သော ဗဟို၊ မြဲမြံသော၊ စုစည်းထားသော ဖောက်သည်ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေတာများကို ရင်းမြစ်များစွာမှ ဆွဲထုတ်ကာ သန့်စင်ပြီး တစ်ခုတည်းသော သုံးစွဲသူပရိုဖိုင်ကို ဖန်တီးရန် (၃၆၀ ဒီဂရီ မြင်ကွင်းဟုလည်း လူသိများသည်)။ ဤဒေတာကို ၎င်းတို့၏ အပြုအမူအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပိုင်းနှင့် ပစ်မှတ်ထားသော ဖောက်သည်များအတွက် ၎င်းတို့၏ အပြုအမူကို အခြေခံ၍ ပရိုဂရမ်မာကြော်ငြာစနစ်များနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ပါသည်။
စက်သင်ယူမှုနှင့် ဉာဏ်ရည်တု ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ပရိုဂရမ်မာကြော်ငြာများ ခေတ်စားလာပါသည်။AI) လူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အမြန်နှုန်းဖြင့် အကောင်းဆုံးသော ကြော်ငြာသူကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ပစ်မှတ်နှင့် ဆက်စပ်နေသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒေတာနှင့် ထုတ်ဝေသူ၏အိမ်ခြံမြေနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမရှိသောဒေတာကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် နှင့် အကဲဖြတ်ရန်။
Programmatic Advertising ရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် ကြော်ငြာများတင်ရန် လိုအပ်သော လူအင်အားလျှော့ချခြင်းအပြင် ပရိုဂရမ်စနစ်ဖြင့် ကြော်ငြာခြင်းသည်လည်း အကျိုးရှိသောကြောင့် -
ဒေတာအားလုံးကို အခြေခံ၍ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ပစ်မှတ်ကို ထုတ်လုပ်သည်။
စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ကြော်ငြာအမှိုက်များကို လျှော့ချပါ။
လက်လှမ်းမီမှု သို့မဟုတ် ဘတ်ဂျက်ပေါ်အခြေခံ၍ ကမ်ပိန်းများကို ချက်ချင်းစကေးချနိုင်မှု။
ထုတ်ဝေသူများသည် ၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကို ချက်ချင်းငွေရှာနိုင်ပြီး လက်ရှိအကြောင်းအရာတွင် ပိုမိုမြင့်မားသော ငွေရှာနှုန်းများကို ရရှိနိုင်သည်။
ပရိုဂရမ်မာတစ်ကြော်ငြာကို လက်ခံကျင့်သုံးရာတွင် ဂဏန်းနှစ်လုံး တိုးတက်မှုကို တွန်းအားပေးသည့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများစွာ ရှိပါသည်။
သီးသန့်လုံခြုံရေး - ကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းကို တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းကွတ်ကီးဒေတာကို လျှော့ချခြင်းသည် ပစ်မှတ်ထားရှိသော ကြော်ငြာရှင်များရှာဖွေနေသည့် သုံးစွဲသူများနှင့်အတူ သုံးစွဲသူများ၏ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြုအမူကို ဖမ်းယူရာတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို မောင်းနှင်စေသည်။
ရုပ်မြင်သံကြား - လိုအပ်သလောက်နှင့် ရိုးရာကေဘယ်ကွန်ရက်များပင် ပရိုဂရမ်စနစ်ဖြင့် ကြော်ငြာရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ကြော်ငြာနေရာများကို ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ် အိမ်ပြင် - DOOH ချိတ်ဆက်ထားသော ကြော်ငြာဘုတ်များ၊ ဖန်သားပြင်များနှင့် အခြားစခရင်များသည် အိမ်ပြင်ပတွင်ရှိသော်လည်း ဝယ်လိုအားဘက်မှ ပလပ်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့် ကြော်ငြာရှင်များအတွက် ရရှိလာပါသည်။
အိမ်ပြင်ပ အသံ - AOOH အိမ်ပြင်ပတွင်ရှိသော ချိတ်ဆက်ထားသော အသံကွန်ရက်များဖြစ်သော်လည်း ကြော်ငြာရှင်များအတွက် ဝယ်လိုအားဘက်မှ ပလပ်ဖောင်းများမှတစ်ဆင့် ရရှိလာပါသည်။
အသံကြော်ငြာများ - Podcasting နှင့် ဂီတပလပ်ဖောင်းများသည် အသံကြော်ငြာများဖြင့် ပရိုဂရမ်မာသော ကြော်ငြာသူများအတွက် ၎င်းတို့၏ပလပ်ဖောင်းများကို ရရှိစေပါသည်။
Dynamic Creative Optimization - DCO ပုံများ၊ စာတိုပေးပို့ခြင်း အစရှိသည်တို့ အပါအဝင် display ads များကို dynamically tested လုပ်ပြီး ဖန်တီးထားသည့် နည်းပညာဖြစ်သည်။
ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chain - ကွန်ပြူတာအကြိတ်အနယ်ရှိသော လူငယ်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း blockchain သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာနှင့်ဆက်စပ်နေသော လိမ်လည်မှုများကို ခြေရာခံခြင်းနှင့် လျှော့ချရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
ကြော်ငြာရှင်များအတွက် ထိပ်တန်း ပရိုဂရမ်မာပလက်ဖောင်းများကား အဘယ်နည်း။
အဆိုအရ Gartner မှAd Tech ရှိ ထိပ်တန်း ပရိုဂရမ်မာပလက်ဖောင်းများ။
FLOW ကို လိုက်နာပါ။ - Europe တွင်တည်ရှိပြီး ဥရောပဈေးကွက်ကိုအာရုံစိုက်ထားသော Adform သည် ဝယ်ခြမ်းနှင့်ရောင်းခြမ်းဖြေရှင်းချက်နှစ်မျိုးလုံးကိုပေးဆောင်ပြီး ထုတ်ဝေသူများနှင့်တိုက်ရိုက်ပေါင်းစည်းမှုအများအပြားရှိသည်။
Adobe က Advertising ကြော်ငြာတိမ်တိုက် - ပေါင်းစပ်မှုကို ကျယ်ပြန့်စွာ အာရုံစိုက်ပါ။ DSP နှင့် DMP သုံးစွဲသူဒေတာပလပ်ဖောင်းအပါအဝင် martech stack ၏ရှာဖွေမှုနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (CDP) ဝဘ်ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်နှင့် တစ်စုတစ်စည်းတည်း အစီရင်ခံခြင်း။
အမေဇုံကြော်ငြာ - သီးသန့် Amazon ပိုင်နှင့် လည်ပတ်နေသော စာရင်းအပြင် ပွင့်လင်းသော ဖလှယ်မှုနှင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်ဝေသူ ဆက်ဆံရေးများမှတစ်ဆင့် ပြင်ပကုမ္ပဏီစာရင်းကို လေလံဆွဲရန်အတွက် ပေါင်းစည်းထားသောအရင်းအမြစ်ကို ပေးဆောင်ရန် အာရုံစိုက်ထားသည်။
amobee - တီဗီ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် လူမှုရေးချန်နယ်များတစ်လျှောက် ပေါင်းစည်းထားသော ကြော်ငြာများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အာရုံစိုက်ထားပြီး၊ လိုင်းနားနှင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် TV၊ စာရင်းနှင့် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပရိုဂရမ်စနစ်ဖြင့် လေလံဆွဲသည့်စျေးကွက်များသို့ ပေါင်းစည်းဝင်ရောက်ခွင့်ပေးထားသည်။
အခြေခံနည်းပညာများ (ယခင် Centro) - DSP ထုတ်ကုန်သည် ချန်နယ်များနှင့် အရောင်းအ၀ယ်အမျိုးအစားများတစ်လျှောက် မီဒီယာအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ကျယ်ပြန့်စွာအာရုံစိုက်ထားသည်။
Criteo - Criteo Advertising သည် စျေးကွက်ရှာဖွေသူများနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမီဒီယာများအတွက် အရောင်းအ၀ယ်ဘက်တွင် ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ full-funnel ဖြေရှင်းချက်များအား နက်ရှိုင်းအောင်လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပစ်မှတ်ထားခြင်းအပေါ် ဆက်လက်အာရုံစိုက်နေပါသည်။
Google Display & Video 360 (DV360) - ဤထုတ်ကုန်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ချန်နယ်များပေါ်တွင် ကျယ်ပြန့်စွာအာရုံစိုက်ထားပြီး အချို့သော Google ပိုင် နှင့် လည်ပတ်နေသော ဂုဏ်သတ္တိများ (ဥပမာ၊ YouTube) သို့ သီးသန့် ပရိုဂရမ်စနစ်ဖြင့် ဝင်ရောက်ခွင့် ပေးပါသည်။ DV360 သည် Google Marketing Platform ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
မီဒီယာသင်္ချာ - ထုတ်ကုန်များသည် ချန်နယ်များနှင့် ဖော်မတ်များတစ်လျှောက် ပရိုဂရမ်မာမီမီဒီယာအပေါ် ကျယ်ပြန့်စွာ အာရုံစိုက်ထားသည်။
Mediaocean - ကြီးထွားမှုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရယူခြင်း ထုတ်ကုန်အစုစုသည် မီဒီယာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မီဒီယာတိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ ပါဝင်သည်။
အဆိုပါကုန်သွယ်ရေး Desk - omnichannel တစ်ခု၊ ပရိုဂရမ်မာ-သီးသန့် DSP ကို ​​လုပ်ဆောင်သည်။
Xandr - ထုတ်ကုန်များသည် ပရိုဂရမ်မာမီမီဒီယာနှင့် ပရိသတ်အခြေပြု TV အတွက် အကောင်းဆုံးအဆင့်ရှိ ပလပ်ဖောင်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ကျယ်ပြန့်စွာ အာရုံစိုက်ထားပါသည်။
Yahoo! ကြော်ငြာနည်းပညာ – Yahoo!၊ Verizon Media နှင့် AOL တို့ရှိ ကုမ္ပဏီ၏ အလွန်အမင်း လူကုန်ကူးခံရသော ပိုင်ဆိုင်သည့် မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖွင့်ထားသော ဝဘ်ဖလှယ်မှုများကို ဝင်ရောက်ခွင့် ပေးပါ။
epomထိပ်တန်း DSP သည် ဤထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သော အင်ဖိုဂရပ်ဖစ်ကို ဖန်တီးထားသည်။ Programmatic Advertising ၏ ခန္ဓာဗေဒ:
Tags: ကြော်ငြာလဲလှယ်ရေးadformadobe ကြော်ငြာadobe ကြော်ငြာပလပ်ဖောင်းကြော်ငြာပလပ်ဖောင်းကြော်ငြာကြော်ငြာနည်းပညာစီးဆင်းမှုကိုအတည်ပြုပါ။amobeeအိမ်ပြင်ပအသံအလိုအလျောက်လေလံကြီးမားတဲ့ data တွေကိုblockchaincdpcentroပုသိမ်သုံးစွဲသူအချက်အလက်ပလက်ဖောင်းဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းdcoဝယ်လိုအားခြမ်းပလက်ဖောင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ကြော်ငြာဒစ်ဂျစ်တယ် Out-of- အိမ်မှာdmpDSPdv360ယုဇနGoogle Display & Video 360google စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလပ်ဖောင်းmediaoceanအစီအစဉ်ကြော်ငြာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်မီဒီယာဆိုရှယ်မီဒီယာကြော်ငြာဝယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာကြော်ငြာဝယ်ယူလူမှုမီဒီယာကြော်ငြာများလူမှုမီဒီယာကြော်ငြာဆိုရှယ်မီဒီယာဒေတာSSDထောက်ပံ့ရေးဘက်ခြမ်းပလပ်ဖောင်းကုန်သွယ်ရေးစားပွဲတီဗီကြော်ငြာများxandrအရှည်ဆုံး
Haversine ဖော်မြူလာ (PHP၊ Python၊ MySQL၊ MSSQL ဥပမာများ) ကို အသုံးပြု၍ လတ္တီတွဒ်နှင့် လောင်ဂျီတွဒ်တို့အကြား ကြီးမားသော စက်ဝိုင်းအကွာအဝေးကို တွက်ချက်ပါ
1:2016 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 5, 04 တွင်
ပရိုဂရမ်မာ ကြော်ငြာတွေကို တွန်းအားပေးမယ့် Big Data က ဘယ်ကလာတာလဲ။
1:2016 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 01 တွင်
ပေတရု၊ ၎င်းသည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းပလပ်ဖောင်းများမှ ဖမ်းယူထားသော စာမျက်နှာပေါ်ရှိ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာဒေတာ၊ ဆိုက်ပြင်ပလူဦးရေစာရင်းနှင့် ပုံသက်သေအချက်အလက်၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းမှု၊ ရှာဖွေမှုမှတ်တမ်း၊ ဝယ်ယူမှုမှတ်တမ်းနှင့် အခြားအရင်းအမြစ်နီးပါးမျှတို့ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ အကြီးဆုံး ပရိုဂရမ်မာပလက်ဖောင်းများသည် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး အသုံးပြုသူများကို ဆိုက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှင့် စက်ဖြတ်ကျော်သည့်တိုင် ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။